Politika fiarovana fiainan'olona - Forex Lens
Ny mpanome tolotra dia tsy hanofa, mivarotra, miditra na amin'ny alalàn'ny fampiasana ny mombamomba ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa. Ity fampahalalana ity dia hotazomina ho tsiambaratelo amin'ny fomba avo indrindra.
Manangona ny adiresy mailaka an'ireo mifandray aminay izahay amin'ny alàlan'ny mailaka, fampahalalana momba ny fidiran'ny mpanjifa na ny fitsidihana, ny toerana misy ny adiresy IP, ary ny fampahalalana an-tsitrapo ataon'ny mpanjifa (toa ny fampahalalana momba ny fanadihadiana sy / na ny fisoratana anarana amin'ny toerana) .Ny fampahalalana. angoninay dia ampiasaina hanatsarana ny atin'ny pejin-tranonkala ary ny kalitaon'ny serivisy.
Mangataka fanazavana toy ny anaranao, anaran'ny orinasa, adiresy mailaka, adiresy faktiora ary fampahalalana momba ny carte de crédit ho an'ny mpampiasa ny serivisy. Mampiasa ny vaovao voangona izahay ho an'ny tanjona ankapobeny: ny vokatra sy ny serivisy amin'ny serivisy, ny volavolan-dalàna, ny famantarana sy ny fanamarinana, ny fanatsarana serivisy, ny fifandraisana ary ny fikarohana.
Cookie iray dia tahiry kely, izay matetika misy fampahafantarana tsy mitonona anarana tsy fantatra anarana, izay alefa any amin'ny navigateur anao amin'ny solosaina tranokala ary notehirizina ao amin'ny rantsan-tanan'ny solosainao. Ilaina ny fampiasana ny Cookies. Mampiasa mofomamy mba hitadihana ny mombamomba ny fivoriana ankehitriny, fa tsy mampiasa mofomamy maharitra.
Mampiasa ireo mpivarotra antoko fahatelo izahay ary mpamatsy mpiara-miombon'antoka mpamatsy tolotra hanomezana ny fitaovana ilaina, rindrambaiko, tambajotra, fitahirizana ary teknolojia mifandraika hitaky ny serivisy nomena. Na dia tompontsika ny kaody, ny angona ary ny zo rehetra amin'ny fampiharana dia mihazona ny zon'ny data rehetra ianao.
Azontsika atao ny mampahafantatra ny mombamomba manokana ao anatin'ny toe-javatra manokana, toy ny fitambaran-doko amin'ny sapina na rehefa manitsakitsaka ny Terms of service.
Azontsika atao matetika ny manavao io politika io ary hampahafantatra anao ny fiovana lehibe amin'ny fomba hitondranay ny mombamomba ny tena manokana amin'ny fandefasana fampandrenesana amin'ny adiresy mailaka voalohany voatondro ho an'ny kaontinao na amin'ny fametrahana fampandrenesana fanta-daza amin'ny tranokalanay. Tafiditra ao ny famindrana angon-drakitra amin'ny hetsika Forex Lens dia azo amin'ny alàlan'ny mitambatra amin'ny orinasa hafa.
Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia natsangana mba hanompo kokoa ireo izay mihevitra ny fampiasana ny 'fampahalalana manokana momba azy ireo manokana' (PII) amin'ny aterineto. PII, araka ny voalaza ao amin'ny lalàna momba ny tsiambaratelo Amerikana sy ny filaminan'ny filazam-baovao, dia fampahalalana azo ampiasaina amin'ny tenany manokana na amin'ny fampahalalana hafa mba hahafantarana, hifandraisana, na hitadiavana olona iray, na hamantarana olona iray ao anaty sehatra. Azafady vakiana amim-pitandremana tsara ny politikantsika manokana momba ny fiarovana ny fahalalantsika ny fanangonana, fampiasana, fiarovana na fanamafisana ny fampahalalam-baovao manokana mifanaraka amin'ny tranokalantsika.
Rehefa mandidy na misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay, raha mety, dia angatahina ny hampiditra ny anaranao, adiresy mailaka, adiresy mailaka, laharana an-tariby, fampahalalana carte de crédit, nomerao fiarovana ara-tsosialy, sehatry ny fadin-tseranana na antsipiriany hafa hanampy anao amin'ny traikefanao.
Manangona fampahalalana avy aminao izahay rehefa misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay izahay, mametraka baiko, misoratra anarana amin'ny kaonty, mamaly valiny, mameno endrika, Mampiasà Live Chat, Manokatra tapakila fanohanana na miditra ao amin'ny tranokalanay.
Manome anay hevitra momba ny vokatra na serivisy fitadiavana anay
Azontsika ampiasaina ny angona angatahinay aminao rehefa misoratra anarana ianao, manao mividy, manoratra ho an'ny gazetinay, mamaly amin'ny fanadihadiana na fifandraisana amin'ny marketing, mijery ny tranonkala, na mampiasa karazana tranonkala hafa amin'ny fomba manaraka:
• Hanamafisina ny traikefanao ary hanome fahafahana anay hanolotra ny karazana votoaty sy vokatra enti-manana izay tena mahaliana anao.
• Mba hanatsarana ny tranokalanay mba hanohanana anao tsara kokoa.
• Mba hahafahantsika manompo tsara anao amin'ny fanentanana ny fangatahanao mpanjifa.
• Mitantana fifaninanana, fampiroboroboana, fanadihadiana na tranonkala hafa.
• Mianara haingana ny fifanakalozanao.
• Mangataka ny mijery sy ny hevitra momba ny asa na ny vokatra
Ny fampahalalana manokana ataonao dia voarakitra ao ambadiky ny tambajotra azo antoka ary tsy azon'ny olona voafetra afa-tsy izay voafetra ny fahafahana miditra amin'ny rafitra toy izany, ary takiana hitazonana ny tsiambaratelo. Ankoatr'izany, ny fampitam-baovao rehetra / fahazoan-dàlana sasantsasany izay atolotra anao dia alefa amin'ny alàlan'ny teknolojia Secure Socket Layer (SSL).
Mampihatra fepetra fiarovana maro isika rehefa mampiasa ny baiko ny mpampiasa iray, mandefa, manolotra, na mahazo ny fampahalalana azy ireo mba hitazonana ny fiarovana ny mombamomba anao manokana.
Eny. Cookies dia antontan-taratasy kely izay tranonkala iray na mpiasan'ny serivisy no mamindra amin'ny fiara sarotra amin'ny ordinateranao amin'ny tranokala (raha avelanao) izay manome fahafahana ny mpamatsy ny tranonkala na ny serivisy hahafantarana ny navigateur anao ary hahatsiaro ny fampahalalana sasany. Ohatra, mampiasa cookies izahay mba hanampiana anay hahatsiaro sy handinika ireo zavatra ao anaty sarintany. Izy ireo koa dia ampiasaina mba hanampiana antsika hahatakatra ny safidinareo mifototra amin'ny asa aman-draharaha taloha na amin'izao fotoana izao, izay manome fahafahana antsika hanome anao tolotra mivoatra. Mampiasa cookies ihany koa izahay mba hanampiana anay hanangona antontam-baovao momba ny fifamoivoizana sy ny fifanakalozan-tranonkalan'ny tranonkala mba ahafahantsika manolotra traikefa sy fitaovana tsara kokoa amin'ny hoavy.
• Ampio hahatadidy sy zarao ireo entana ao amin'ny lisitry ny varotra.
• Fantaro ary tsindrio ny safidin'ny mpiserasera ho amin'ny famangiana amin'ny ho avy.
• Araho hatrany ny dokam-barotra.
• Manambatra angon-drakitra momba ny fifamoivoizana amin'ny tranokala sy ny fifaneraserana amin'ny toerana, mba hanoloranao traikefa sy fitaovana tsara kokoa amin'ny ho avy. Azontsika atao ihany koa ny mampiasa serivisy fahatelo natokisana izay manara-maso izany vaovao izany ho anay.
Azonao atao ny misafidy ny hampitandrina anao amin'ny ordinateranao isaky ny mandefa cookie iray, na azonao atao ny misafidy ny manapaka ny cookies rehetra. Manao izany ianao amin'ny alàlan'ny sehatry ny tranokala. Noho ny tsy fitovian'ny navigateur hafa, jereo ny Help Menu amin'ny navigateur mba hianatra ny fomba tokony hanovana ny cookies.
Raha tsy manaisotra mofomamy ao amin'ny navigateur izy ireo:
Raha mamono ny mofomamy ianao dia hamadika ny endri-javatra sasany amin'ny tranokala.
Tsy hivarotra, hivarotra, na handefasana amin'ny antoko ivelany ny fampahalalana manokana momba anao manokana raha tsy manome alalana ny mpampiasa. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fampiantranoana vohikala fampiantranoana sy antoko hafa izay manampy antsika amin'ny fikarakarana ny vohikalantsika, ny fitantanana ny orinasantsika, na ny manompo ny mpampiasa azy, raha toa ka manaiky izany ny antokony mba hitazonana izany tsiambaratelo izany. Azontsika atao ihany koa ny mamoaka vaovao rehefa manafaka ny lalàna ny lalàna, mampihatra ny politikan'ny vohikala, na miaro antsika na ny zon'ny hafa, ny fananana na ny fiarovana.
Na izany aza, ny fampahalalam-baovao tsy fanta-daza dia azo omena amin'ny antoko hafa ho an'ny varotra, dokam-barotra na fampiasana hafa.
Indraindray, araka ny fahalalanay, azontsika atao ny manolotra na manolotra vokatra na serivisy ao amin'ny tranonkalantsika. Ireo tranonkala fahatelo ireo dia manana politika manokana. Tsy manana andraikitra na tompon'andraikitra amin'ireto tranonkala mifandraika ireto àry izahay. Na eo aza izany dia mikendry ny miaro ny fahamarinan'ny tranonkalantsika izahay ary mandray izay valiny momba ireo tranonkala ireo.
Mampiasa ny Google AdSense Advertising izahay ao amin'ny tranokalanay.
Google, amin'ny mpividy mpivarotra fahatelo, dia mampiasa cookies hanehoana dokambarotra ao amin'ny tranokalanay. Ny fampiasan'i Google ny cookie DART dia mamela azy hanolotra dokam-barotra ho an'ny mpampiasa anay miorina amin'ny fitsidihana teo aloha tao amin'ny tranokalanay sy tranonkala hafa ao amin'ny Internet. Ireo mpampiasa dia afaka misafidy ny hampiasa ny cookie DART amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny politikan'ny fiainana manokan'ny Google Ad sy Content Network.
• Demografika sy Tatitra momba ny Tatitra
California Act Online Protection Act
CalOPPA no lalàna voalohany ao amin'ny firenena ka mitaky tranonkala ara-barotra sy serivisy an-tserasera handefa ny politika manokana. Ny fatran'ny lalàna dia miitatra mihoatra ny any California mba hitaky olona na orinasa any Etazonia (ary tsy misy dikany ny momba an'izao tontolo izao) izay miasa tranonkala manangona fampahalalana azo fantarina avy amin'ny mpanjifa any California hametraka politikam-bahoaka momba ny tsiambaratelo ao amin'ny tranokalany izay manambara ny fampahalalana angonina sy ireo. olona na orinasa izay izarana azy. - Jereo bebe kokoa amin'ny: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Araka ny voalazan'i CalOPPA, dia manaiky ireto manaraka ireto isika:
• Amin'ny fidirana ao amin'ny kaontinao
Ampahafantarinay ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampandrenesana
• Mandefa vaovao, mamaly fanontaniana, ary / na fangatahana na fanontaniana hafa
• Fepetra momba ny fikarakarana sy ny fandefasana fampahalalana sy fanavaozana mifandraika amin'ny baiko.
• Alefaso fampahalalana fanampiny momba ny vokatrao sy / na ny serivisy ianao
• Tsena amin'ny lisitry ny mailaka mailaka na manohy mandefa mailaka amin'ny mpanjifantsika taorian'ny nitrangan'ny tranga tany am-piandohana.
Mba hifanaraka amin'ny CANSPAM dia manaiky ireto manaraka ireto isika:
• Aza mampiasa adihevitra diso na mamitaka na adiresy mailaka.
• Ampahafantaro ny hafatra ho toy ny dokam-barotra amin'ny fomba mahasoa.
• Ampidiro ny adiresy ara-bakitenin'ny orinasanay na ny foibenay.
• Manara-maso ireo tolotra mailaka amin'ny adiresy mailaka hafa ho an'ny fanarahan-dalàna, raha ampiasaina.
• Ny fanomezam-boninahitra dia manaisotra haingana ny fangatahana.
• Avelao ny mpampiasa hisoratra anarana amin'ny alàlan'ny rohy any amin'ny farany ambany amin'ny mailaka.
Raha toa ianao ka te-hiala amin'ny fandraisana mailaka hoavy amin'ny fotoana rehetra, azonao atao ny mandefa mailaka amin'ny
• Araho ny torolalana amin'ny farany ambany amin'ny mailaka tsirairay.
ary hanala anao avy hatrany ALL taratasy.
Farany natonta tamin'ny 2018-05-23